Ziyintoni iinkonzo zikamasipala? – Civics Academy
UmGaqo-siseko uchaza imisebenzi yecandelo ngalinye likarhulumente kwiiShedyuli zesi-5 nezesi-6. IsaHluko B sezi Shedyuli sicacisa phandle ngeenkonzo urhulumente wasekhaya ekufuneka ezinikile, kuqukwa, umzekelo, umbane, amanzi neenkonzo zococeko neendlela. Eminye imisebenzi “kuyabelwana ngayo”, oko kuthetha ukuba amacandelo ahlukeneyo karhulumente kufuneka asebenzisane ukuze abe nako ukuwenza.
Oomasipala bayahluka kakhulu, into ke leyo ethetha ukuba ubuchule babo bokwenza ingeniso kunye neendleko abajongana nazo kwakhona ziyahluka. Bonke oomasipala kufuneka bazenzele eyabo ingeniso esuka kwiigranti, kwiimali-mboleko nakwiintlawulo zabasebenzisi-zinkonzo.
Oomasipala bafumana iigranti ezisuka kwiirhafu eziqokelelwa ngurhulumente kazwelonke. Kukho iindidi ezimbini zegranti, oko kukuthi, isibonelelo sikamasipala esiyi-Equitable Share Grant kunye nesibonelelo sikamasipala esiyi-Municipal Infrastructure Grant. Igranti eyi-Equitable Share grant isetyenziselwa ukunceda ekuhlawuleleni iinkonzo ezingundoqo zabantu abanomvuzo onganeno kumlinganiselo othile. Isibonelelo esiyi-Municipal Infrastructure Grant sinceda ekuhlawuleleni iindleko zolwakhiwo lweenkonzo zeziseko zophuhliso ezingundoqo. Oomasipala kuye kufuneke ukuba baboleke imali esuka kwiirhafu nakwiintlawulo. Oomasipala, abangengabo oomasipala bezithili, kwakhona banyanzelisa iirhafu kwiipropati ezinjengezindlu nakumashishini, ngokusekelwe kumaxabiso azo, wona abavumelayo ukuba babe nokuxhasa ngemali iindleko zeenkonzo. Oomasipala kwakhona baqokelela iimali zokusetyenziswa kweenkonzo ezinjengombane, ukuqokelelwa kwenkunkuma namanzi kunye neenkonzo zococeko.
Le mithombo ichithwa ekucwangcisweni, ekwakhiweni, ekuqhutyweni nasekulondolozweni kweenkonzo ekubonelelwa ngazo. Ukuba abasebenzisi ngabangazifanelanga iinkonzo zasimahla abazihlawuleli ezo nkonzo, oomasipala abanayo imithombo yokuqhubeka benika ezi nkonzo.